युगसम्बाद साप्ताहिक - सत्ता र पैसाले ल्याएको आजको विचलन - महेश्वर शर्मा
Saturday, 04.04.2020, 08:40am (GMT+5.5) Home Contact
“एकैपटकको जुनी हो, नराम्रो काम नगर है” भन्थे बूढापाकाहरु । तर हिजोआज कसले सुने ? पहिलेका मान्छे नाम कमाउनुपर्छ भन्थे भने आजका दाम कमाउनपट्टि दगुरिरहेका छन् । दाम कमाएपछि नाम त्यसै कमिन्छ भनेर दामका पछि दगुर्नेहरु नाम त कताकता, बदनाम भएको पनि देखिएकै छ । यो कमाउने रोगले गर्दा जीवनमा गर्नुपर्ने काम थाहै नपाई जानेबेला भैसकेको पनि थाहा नपाउने हुँदा रहेछन् । त्यस्तालाई अन्तिम अवस्थामा पछुतो बाहेक केही हात लाग्दैन । सत्तालाई कमाउने श्रोत बनाउनेहरुको त झन कुरै भएन । उनीहरु त आँखा चिम्लेरै मरिमेटेका हुन्छन् र तैपनि स्वार्थ बाहेक अरुको हितमा सिन्को पनि नभाँची संसारबाट विदा हुनेहरुको भीड व्यापारिक र राजनीतिक क्षेत्रमै बढी भेटिनु आजको विशेषता नै भएको भन्नुपर्छ । यो एकप्रकारको कर्तव्यप्रतिको विचलन हो ।
धन–पैसा वा हतियारले आफैं काम गर्दैनन्, यिनलाई प्रयोग गर्ने मान्छेले हो । गतिलाका हातमा परे सदुपयोग हुन्छ भने अगतिलाका हात परे दुरुपयोग । राम्रो काममा प्रयोग हुने पैसाले समृद्धि ल्याउँछ भने नराम्रा काममा प्रयोग भएमा नराम्रै नतिजा निस्कन्छ । बञ्चरोले काठ–दाउरा चिर्छ, तर अनाडीले चलाए आफ्नै खुट्टो काट्न बेर लाग्दैन । यसरी जुनसुकै कुरा पनि प्रयोगकर्ताको क्षमता र अक्षमतामा भरपर्ने हुन्छ । आफूले पौरख–मिहिनेत केही नगरी अर्कैका कमाइमा र रजाई गर्नेहरुको आज हाईदुहाई छ । सत्ता र पैसाले विचलन ल्याइदिएको छ । त्यत्तिमात्रै भए त हुन्थ्यो, अर्काको कमाइमा मोज गर्नेहरु नै जनताको दोहनमा लागेका छन् ।
यथार्थमा देश जोगाउनमा सामान्य नागरिकको भूमिका प्रशस्त रहेको छ । देशमा ठूला साना कति आन्दोलन भए तिनमा सामान्य नागरिकै बलि चढेको छ । त्यस्ता आन्दोलनमा ठूला नेता वा उनका परिवारका सदस्य परेको पाइँदैन । नेता त कमाई खाने मात्रै भए । ‘चोट पाउने कालु–मकै खाने भालु’ भनेको शायद यस्तैलाई होला । जुन जनताले चुनेर पठाउँछन् तिनैको बेवास्ता मात्रै होइन, तिनैको शोषण गरिन्छ भने के भन्ने ? बुझाई आआफ्नै होला, तर जसको काँधमा चढेर माथी पुगेको हुन्छ त्यसैलाई लत्याउनु सुहाउँदो होला त ? सम्पन्न भएपछि आफ्नो पूर्वस्थिति बिर्सनु र राम्रो जति आफूले गरेको र नराम्रो जति अर्कैकाा टाउकामा थोपर्ने पूवृत्तिले अन्ततः आफ्नै अधःपतनको संकेत दिने किन नसम्झेका होलान् ?
राजतन्त्र पाखा लगाएपछि केके न फलिफाप हुन्छ भनेर जनतालाई भनिएको थियो, त्यो फलिफाप त आफ्नै भभागमा मात्र पारिन्छ भने जनताले कसरी चित्त बुझाउँछन् ? चाहे राष्ट्रपति या सभामुख निष्पक्ष अर्थात् सबैको साझा हुनुपर्नेमा जनताले त्यो अनुभव गर्न पाएन भने भनाइबाट मात्र चित्त बुझ्ने कुरा भएन । यथार्थ स्वीकार गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीबाट आउने व्यक्ति निष्पक्ष हुनै सक्दैन । राजाको कुनै पार्टी थिएन । राजाको उद्भव पार्टी राजनीतिबाट भएको होइन । दलीय समूहबाट आउने व्यक्तिमा राजामा हुनुपर्ने र हुने गुण आउनै सक्दैन । अस्ति भर्खर राष्ट्रपतिले नेताहरुका शालिक अनावरण गर्नुभयो हेटौंडा गएर । त्यस्ता कामलाई निष्पक्ष भन्न मिल्ला ? स्वाभाविक प्रवृत्तिमा आउने कुरालाई बलमिच्याई गर्न खोजेर हुँदैन । व्यवहारबाटै देखिने र देखिइरहकै कुरालाई बलै सिद्ध गर्न खोज्दा बरु उल्टो असर पर्नसक्छ भनेर बुझ्नसपर्छ ।
मूल कुरा– प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पनि जनतामाा भूम नपर्ने गरी विश्वासको वातावरणमा काम हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ’ भन्नुभएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा परिणत भएको हुनुप¥यो । उहाँको भनाई एकातिर र सूचना प्रविधि विधेयकको व्यहोरा अर्कातिर भयो भने उहाँकै भनाई शंकास्पद हुनजान्छ । त्यस्तै अवस्थाा नागरिकता विधेयकका बारेमा पनि नआवस् र सबै काम विश्वासकै वातावरणमा सम्पन्न होस् भन्नुपर्दछ ।
सरकारका तर्फबाट प्रचार बढी र गुणात्मक काम थोरै भयो भन्ने गुनासो तर्फ पनि सरकारको ध्यानन जानुपर्छ र आफ्ना कमी कमजोरी केलाएर जनताका भावनालाई बुझ्नुपर्छ, कोरा प्रशंसा खोज्ने र निन्दा प्रति रोष मात्र प्रकट गरेर हुँदैन भन्नेतर्फ सजग रहनुन आजको आवश्यकता हो भन्नु अर्घेल्याई हुने छैन ।